GrabaChat dia mahazo voninahitra ambony indrindra amin'ny faran'ny herinandro fanombohana | Martech Zone
GrabaChat dia mahazo voninahitra ambony indrindra amin'ny faran'ny herinandro fanombohana
Alatsinainy Aprily 11, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Lorraine Ball
Tamin'ny zoma, nanoratra lahatsoratra tao amin'ny bilaogiko aho Faran'ny herinandro fanombohana. Tao anatin'izany no nanolorako hevitra fa maro amin'ireo mpandray anjara no hanana fanandramana manova fiainana ary angamba:
Manana asa vaovao
Mananà orinasa iray
Jereo fa lasa zava-misy ilay hevitra adalanao nodaka
Ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Team GrabaChat dia marina izany. Ny vokatra azon'izy ireo loka dia fampiharana mivantana amin'ny chat, izay azonao ianarana bebe kokoa momba azy eto: Grabachat . Efa manomboka mamorona buzz izy ireo ary antenaiko fa handre bebe kokoa momba azy ireo isika, ary ny iray hafa orinasa natomboka tamin'ny faran'ny herinandro
Manantena izahay fa hanao hetsika iray hafa farafahakeliny amin'ity taona ity. Ny fanontaniana tokana dia hoe raha vonona ny hanana fiainana manova fiainana ianao?
Tetibola fanovana 53% avy amin'ny pirinty mankany amin'ny fikarohana sy sosialy
Apr 17, 2011 amin'ny 1: 31 AM
Vao avy namaky tantara mahafinaritra iray momba ny fomba fijerin'ny sasany amin'ireo mpitarika ny hetsika Web 2.0 ankehitriny ny lahatsary ho fampahalalam-baovao manaraka handresy aho. Ny vidin'ny bandwidth sy ny teknolojia ankehitriny dia mahatonga ny fandefasana horonan-tsary sy fitahirizana ho mora kokoa. Mampientam-po ny mahita an'i Grabachat eo amin'ny faran'ity.